OSMC: Ulo oru nke di otutu nke otutu nke ulo gi | Akụrụngwa n'efu
OSMC: Ulo oru nke di otutu nke Rasberi Pi
Ọ bụrụ na ị nwere Ntu Pi ị ga-enwe oké osimiri nke ohere na okwu nke iji SBC a nwere otutu ikike. Otu n'ime ha nwere ike ịdị ka a ochie video egwuregwu console na ndị emu, ma ị nwekwara ike ịmepụta ụlọ ọrụ mgbasa ozi gị nke dị elu maka ime ụlọ gị maka naanị euro ole na ole na OSMC.
na sistemụ arụmọrụ dị iche iche maka Pipe Pi ha na-enye ọtụtụ egwuregwu. Mana oge a ka m ga-elekwasị anya nyochaa OSMC...
2 Banyere OSMC
Un ụlọ ọrụ mgbasa ozi, ma ọ bụ ebe mgbasa ozi, bụ sọftụwia na - enye gị ohere ịnwe ma nwekwaa ọdịnaya ọhaneze niile. Nwere ike ịkpọ egwu, ihe nkiri, gosipụta eserese na veranda, wdg. Ihe niile sitere na ọdịnaya multimedia echekwara na draịvụ mpaghara, ma ọ bụ ịnweta ọdịnaya a site na netwọk.
Mgbe ụfọdụ o nwekwara ụfọdụ mgbakwunye, dị ka ike idekọ ọdịnaya, ịnweta ịntanetị, gosipụta ọwa telivishọn ma ọ bụ ọdụ redio, wdg.
Ndị a multimedia emmepe nwere ike na-agba ọsọ na a ngwaọrụ mobaịlụ, na PC, na SBC dị ka OSMC na Raspberry Pi, na igwe onyonyo, wdg.
Usoro ndị a na-ewu ewu n'oge na-adịbeghị anya, karịsịa mgbe mwepụtara nke Microsoft Windows Media Center, sistemụ arụmọrụ sitere na ụlọ ọrụ Redmond maka ụdị ebe a. Ọ bụ ezie na mgbe ahụ, e nweela usoro ndị ọzọ a hụrụ na ụfọdụ egwuregwu egwuregwu, yana sọftụwia na-ewu ewu nke karịrị ya ...
Dịka ọmụmaatụ, enwere oru ngo dị ebube dịka Kodi, MythTV, OpenELEC, LibreELEC, OSMC, wdg.
Dị ka ha na-ekwu na gọọmentị webụsaịtị nke oru ngo, OSMC bụ n'efu, ụlọ ọrụ mgbasa ozi na-emeghe emeghe nke ndị mmadụ wuru maka ndị mmadụ. N'ezie, acronym osMC sitere na Open Source Media Center. Site na ya na euro iri ole na ole iji zụta Pipe Pi gị, ịnwere ike ịnwe ebe mgbasa ozi dị n'ime ime ụlọ gị iji lelee TV gị.
OSMC bụ n’ezie nkesa GNU / Linux nke ezubere maka SBC yana sọftụwia arụnyere tupu arụ ọrụ multimedia, dịka Kodi, nke na-eweta ya arụnyere na ya wee gbanwee iji nye ya mmetụ onwe onye na nke mbụ, na-eme ka arụmọrụ kawanye mma yana nnukwu akwụkwọ nke codecs ka ị nwee ike igwu ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ usoro ọ bụla.
Sistemụ OSMC bụ dabere na Debian, ya mere o nwere ezigbo ntọala siri ike ma sie ike. Ihe ikpo okwu nke mere na ị ga-echegbu onwe gị banyere ihe masịrị gị n'oge ndị ahụ: ọdịnaya.
Dabere na Debian, ị nwekwara ike "Mbanye anataghị ikike" ma mee ka ọ rụọ ọrụ karịa naanị ụlọ ọrụ mgbasa ozi. N'ezie, distro a na-eweta nchekwa gọọmentị atọ dị njikere ibudata ma wụnye ngwa ọhụụ. Ebe ngwanrọ zuru ezu site na ebe ị nwere ike ịnweta ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke mmemme na mmelite.
N'agbanyeghị na m na-eji Kodi, dị ka m tụlere n'elu, ọ bụghị otu ihe ahụ ka Kodi. Mgbe ị na-eji OSMC, ị ga-ahụ ọtụtụ ọdịiche dị na nke mbụ. Ma ọ gbanwetụrụ maka mfe ojiji, ịbụ Mkpa ọkụ na ngwa ngwa. Dịka ọmụmaatụ, ụlọ ahịa ndọtị nke ọ gụnyere bụ nke ya.
OSMC bụ sistemụ arụmọrụ, Kodi mmemme. Cheta nke a. Nke a pụtakwara ụfọdụ mwepu maka OSMC, dị ka ndakọrịta. Ọ bụ ezie na Kodi dị maka nyiwe dị iche iche dịka GNU / Linux, Windows, Android, macOS, wdg, OSMC na-akwado Raspberry Pi, Vero, na ụfọdụ Apple TVs ochie.
OSMC nwere ihe nrụnye maka Windows na macOS nke na-enye gị ohere ịkwadebe kaadị microSD maka Raspberry Pi, nke na-eme ka ihe dị mfe. Na mbụ enwere onye nrụnye maka Linux, mana ugbu a ọ pụọla na weebụsaịtị nbudata ma gbahapụ ya, mana echegbula, ọ bụrụ na ị na-eji distro enwere ụzọ ndị ọzọ dị ka Etcher, Unetbootin, wdg, nke m ga-akọwa na ngalaba na-esote ... Otú ọ dị, ọ bụrụ na ịchọrọ ụdị ochie nke ngwugwu osmc-installer, ọ ka dị dị Ebe a.
Ọ bụrụ na ịchọrọ wụnye OSMC na Rasberi Pi gị, usoro ime ya dị mfe. Justkwesịrị ịgbaso usoro ndị a:
Budata OSMC site na gọọmentị webụsaịtị nke oru ngo. Ọ bụrụ na ị nwere sistemụ arụmọrụ Windows ị nwere ike ịhọrọ installer maka OS a, ma ọ bụ ọ bụrụ na ị nwere macOS ya na onye nrụnye kwekọrọ na ya ma ọ bụ budata onyonyo ahụ ozugbo:
Ọ bụrụ n'inwere sistemụ ọzọ, ị nwere ike pịa bọtịnụ Disk Images wee budata onyonyo nke ụdị ọhụụ kachasị edepụtara dịka ụdị nke Raspberry Pi ha nabatara (iji mee ka onye na-ajụ ihe ọfụma na onyonyo ị nwere jiri Etcher).
Ọ bụrụ na ị họrọla onye nhazi ahụ, ịnwere ike ịgba ya na ya ga - eduzi gị site na ọkachamara iji budata ụdị ịchọrọ, họrọ usoro ntinye (SD, USB, ...), na ụdị njikọ ka ihe niile ahazi.
Ozugbo inwere etiti ya na OSMC arụnyere, ịnwere ike itinye ya n'ime oghere Pipe gị ma bulie ya.
Ugbu a Rasberi Pi na-agba ọsọ, ị ga-emecha usoro iji rụchaa nweta Kodi. Cheta na ikwesiri ka Raspberi Pi jikọtara na ihuenyo, ma ọ dịkarịa ala keyboard.
Kwesịrị ị na-ama na-ahụ OSMC loading ihuenyo, mgbe usoro zuru ezu na ọ ga-egosi gị mmalite ọkachamara hazie dị iche iche kwa. Iji maa atụ asụsụ, aha ngwaọrụ, isiokwu wdg.
Ugbu a bụ mgbe echichi OSMC zuru ezu. Ugbu a, ị ga-enwe ike ịnweta ihe niile a sistemụ awade na ya Kodi gbanwetụrụ.
I nwere ike ịnụ ụtọ ya ugbu a nke ọdịnaya niile niile ịchọrọ, wụnye ngwa ma ọ bụrụ na ọ dị gị, wdg.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Ntu Pi » OSMC: Ulo oru nke di otutu nke Rasberi Pi
Iwu Kirchhoff: iwu bụ isi maka ọnụ na sekit eletriki
Electrolytic capacitor: ihe niile ịchọrọ ịma